Home Wararka Beesha Cawlyahan oo taageero buuxda la garab istaagtay Axmad Madoobe iyo Wasiir...
Beesha Cawlyahan oo taageero buuxda la garab istaagtay Axmad Madoobe iyo Wasiir Omaar oo fashilmay (Video)
Madxaweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland mudane Axmad Islaan (Axmad Madooboe) ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay waxa ay ku jireen olole dagaal oo ka dhan ah kooxda Argagaxisada Al Shabaab, ololahaas waxa barbar socday wadatashiyo uu Axmad Madoobe la sameeynayay shacabka ku dhaqan Jubbaland.
Olalaha ka dhanka ah kooxda Al Shabaab ayaa meel fiican maraya iyada oo Jubbaland ku guuleysatay in ay degaano badan kala wareegto kooxda Al Shabaab.
Dowlada Fedaraalka ayaa in mudo ah ku mashquulsanayd sidii loo fashil lahaa ololaha uu hogaaminayo Madaxweyne Axmad Madoobe. Waxaa uu Farmaajo isku dayay in uu dhaqaale ku bixiyo in mucaaradka ka soo horjeedo Madaxweyne Axmad Madoobe si ay shirar ugu qabtaan dalka gudahiisa iyo dibadiisa shirarkaas oo looga mucaaradayo hogaanka Madaxweyne Axmad Madoobe.
Dhanka kale waxa isagana da’daal ku jiray Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee dowlada Fedaraalka Maxamed Cabdullaahi Salaad (Omaar) oo ka soo jeedo beesha Cawlyahan. Wasiirkaan ayaa waxa loo balan qaaday in lacag badan lagu maalgalinayo doorashada soo socoto ee Jubbaland. Sidaas darteed ayaa Wasiir Omaar waxa uu in mudo ku mashquusanaa in uu kiciyo beesha Cawlyahan oo ay ka soo horjeestaan hogaanka Axmad Madoobe isaga ku eedeyay Axmad Madoobe in uusan diyaar u ahayn in uu xureeyo deekaanka ay degto beesha Cawlyahan.
Hadaba asbuucyadii la soo dhaafay ayaa ciidanka Jubbaland ku guuleysteen in ay dib u xureeyaan deegaano ka mida deegaada beesha Cawlyahan taas oo beenisay dacayadii Farmaajo iyo Wasiir Omaar.
Beesha Cawlyahan oo aad uga maqsuuday guusha laga gaaraay degaanka beesha ay degto ayaa isaga yimid dhamaan deegaanada ay ka degan yihiin Geeska Afrika ayaga oo taageero buuxda siiyay dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Axmad Madoobe.
Waxaa muuqato in uu fashil uu ku dhamaaday qorshihii Farmaajo iyo Wasiir Omaar oo ahayd in la iksu diro shacabka reer Jubbaland si burbur ugu yimaado hogaanka Axmad Madoobe.
Hadaba Su’aasha isweydiinta u baahan waxa ay tahay MW Farmaajo ma sii wadi doonaa dacaayadiisa iyo qorshihiisa uu doonayay in uu ku burburiyo deegaanka Jubbaland. Sidoo kale siyaasiyiinta beesha Cawlyahan oo uu horeeyo Farax Macalin maxaa tilaabo ah oo ay ka qaadi doonaa qoshaha Farmaajo ee ku dhisan in Beesha Ogaadeen la kala qaybiyo.